विविध Archives » Nepal Ireland News
गहना सरि देश बनोस् ! कवि :- दुष्यन्त भट्टराई
कविता —— गहना सरि देश बनोस् —————– दिनमा झलमल्ल उषा छरिउन् , सबका दिलमा ख़ुश हाल रहुन् । सबका घरमा सुख बास गरोस् , अब यो गहना सरि देश बनोस् ।१। कति ताल सरोवर मोहक छन् , बन जंगल सुन्दर द्योतक छन् । मन...
भरतपुर २७ को वडा अध्यक्ष्यमा राप्रपाबाट पिताम्बर अर्याल
चितवन, १६ बैशाख । देशैभर स्थानिय निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेका बेला राप्रपा चितवनले भरतपुर महानगर पालिका २७ मा विकासप्रेमी युवा उम्मेदवार पिताम्बर अर्यालको नेतृत्वमा चुनावी दौडमा उत्रने निर्णय गरेको छ । भूमिसुधार तथा ब्यबस्था मन्त्रि...
सिलिगुढी, पुस १८ तीन वर्षअघि गञ्जी र कट्टु लगाएर फुटबलको बुट बोक्दै घरबाट बाहिर निस्किदा सावित्रा भण्डारीको विषयमा गाउँका धेरैले कुरा काटेका थिए। हाल मनाङको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पीयन पदमा कार्यरत सावित्राको बुवा थमबहादुर भण्डारीलाई...
आफ्नो-पराई – कबि : दुस्यन्ता भट्टराई -Scotland बिर्सीयौ की चाम्रे खाजा, बिर्स्यौ हलो जोत्या ? बिर्सीयौ की तिम्ले पनि चुलो, दैलो पोत्या ? विदेश जाने भने पछि उड्यौ लगाई पंखा, हुन्न कैल्यै स्वर्ग आफ्नो पराईको लंका...
पान पसलमा ब्राउनसुगर
बाँके, भदौ १२ – नेपालगञ्जको एउटा पान पसलबाट ब्राउनसुगरको कारोबार हुने गरेको भेटिएको छ । ११ पुरिया लागुऔषध ब्राउनसुगर सहित नेपालगञ्जको बसपार्कबाट एक पान पसले पक्राउ परेका छन् । नेपालगञ्जको बसपार्कमा पानपसल सञ्चालन गर्दै आएका सुरेन्द्र...
रोल्पा, भदौ ३। वन समूहको बैठकमा विवाद हुँदा रोल्पाको जौलिपोखरीमा विहीबार एकजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय ६३ वर्षीय खरवीर बस्नेत छन् । भीरकुना सल्लेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जौलिपोखरी–२ लामीडाँडाको बैठकमा...
युवक मारिएपछि अमेरिकामा हिंसा भड्कियो
वासिंटन, साउन ३१। अमेरिकाको मिल्वाकीमा हतियारधारी २३ वर्षे युवक प्रहरी कारवाहीमा मारिएपछि हिंसा भड्किएको छ । प्रदर्शनका क्रममा शहरका विभिन्न क्षेत्रका भवन, पेट्रोल स्टेशन र सवारी साधनमा आगजनी गरिएको छ । कारमा रहेका ती...
धुर्मुस–सुन्तलीको खातामा चार करोड ७५ लाख
काठमाडौं, असार ३१ – धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा हाल सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा निर्माणाधिन नमुना एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि चार करोड ७५ लाख रुपैँया सहयोग संकलन भएको छ। निर्माणकर्ता हास्यकलाकार जोडी सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’का अनुसार...
लाख माथि घुस लिने किन पक्राउ पर्दैनन् ? मुन्द्रेको प्रश्न
२५ असार, काठमाडौं । सामाजिक संजालमा कलाकारहरुले देशको अवस्थाबारे विभिन्न खालका भनाई सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । देशमा देखिएको विकृती, विसंगतीमा कलाकारले आफ्नो भनाई राख्ने गतिलो ठाउँ भएको छ, सामाजिक संजाल । यीनै कलाकारको भीडमा...
एकैदिनमा एमआरपी पासपोर्ट !
काठमाडौं- मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अब सेवाग्राहीले चाहेकै दिनमा लिन सकिने भएको छ । राहदानी विभागले सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार एकै दिनमा एमआरपी उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । सेवाग्राहीले आवेदन दिएकै दिन बढी शूल्क लिएर विभागले...
भूकम्पपीडित भोकै, एक लाख ६० हजार किलो चामल कुहाएर खाल्डोमा
गणेश थापाले भने–‘अब ‘क्यास’मा जान्छु’
आमाको सिउँदोमा सिन्दूरपछि मात्रै छोराको बिहे !
इक्युडोरमा ७.८ म्याग्निच्यूडको भूकम्प, २८ को मृत्यु